Huawei Nova Plus, notsapainay ho anao io tamin'ny IFA 2016 | Androidsis
Huawei dia nitondra tsy nampoizina vitsivitsy tamin'ity fanontana ny IFA any Berlin ity. Ny mpanamboatra aziatika dia nametraka ny hena rehetra tao anaty lovia niaraka tamin'ny fianakaviany Nova vaovao ary ilay takelaka matanjaka Huawei MediaPad M3. Efa nasehonay anao ny anay fahatsapana voalohany taorian'ny fitsapana ny Huawei NovaIzao ny Nova Plus, ilay kinova vitamina izay miavaka amin'ny efijery 5.5-inch sy ny fakantsary 16-megapixel izay manolotra fampisehoana mahatalanjona fotsiny. Aza adino ny fijerinay horonan-tsary momba ny Huawei Nova Plus!
1 Huawei Nova Plus dia manana famaranana premium ary fakantsary tena matanjaka
Huawei Nova Plus dia manana famaranana premium ary fakantsary tena matanjaka
Izahay dia zatra amin'ny kinova hafa mitovy amin'ilay maodely mitovy endrika manana endrika mitovy. Tsy izany no mitranga amin'ny fianakavian'i Nova. Ary izany ve ny fahasamihafana eo amin'ny hatsarana eo amin'ny Huawei Nova sy ny Huawei Nova Plus dia mihoatra ny mahavariana.
Raha nampahatsiahy antsika ny Nexus 6P ny Huawei Nova, amin'ny tranga Huawei Nova Plus, indrindra ny lamosiny, Tena mitovy amin'ny Huawei Mate 8, miaraka amin'izany famolavolana efajoro eo amin'ny fakan-tsary sy ny sensor sensor izany. Misy lojika raha heverintsika fa mitovy ny solomaso.
Ho an'ny ambiny, lazao fa ny Ny vatan'ny metaly an'ny Huawei Nova Plus dia manolotra fikitika mahafinaritra, ankoatry ny somary mifintina hanana efijery 5.5-inch. Ankoatr'izay, ny lanjany 160 grama dia manamarina fa tena mandanjalanja tsara ity telefaona vaovao ity.
lafiny X X 51.8 75.7 7.3 MG
efijery IPS 5.5-inch miaraka amin'ny famahana 1920 x 1080 pixel sy 401 dpi
Fakan-tsary aoriana 16 megapixel sensor miaraka amin'ny autofocus / face detection / panorama / HDR / LED flash / Geolocation / Video recording 2160p (2K) amin'ny 30fps
vidiny 429 euro (misy amin'ny Oktobra)
Araka ny efa hitanao, ny Huawei Nova Plus dia manana endrika mitovy amin'ny an'ny kinova tsy misy kafeinina, na dia misy nuansa vitsivitsy aza. Amin'ny lafiny iray dia manana ny efijery isika, izay amin'ity tranga ity mitombo hatramin'ny 5.5 santimetatra. Ny tontonana IPS dia manome mihoatra ny zoro fijerena marina, mampiseho loko mazava sy maranitra.
Su mpamaky ny rantsantanana Manaraka ireo modely hafa an'ny marika, miaraka amina fotoana valiny tsara ary mamela azy hampiasaina amin'ny lafiny rehetra satria 360 degre izany. Afaka manao hetsika vitsivitsy ihany koa isika amin'ny fihetsika tsotra amin'ity sensor biometrika ity, toy ny fidirana amin'ny bara fampandrenesana.
Ny teboka mahery an'ny Huawei Nova Plus dia miaraka amin'ireo fakantsariny. Amin'ny lafiny iray dia manana isika fakantsary mahery 8 megapixel izay manana safidy maro be hampiasaina sy hankafizin'ny olona tia ny sariny.
Izany dia tsy maintsy ampiana ny azy Lensa 16 megapixel miorina ao ambadiky ny telefaona ary hahagaga anao ny hatsarany. Ny maha fakantsary anao an'ilay nametraka ny Huawei Mate 8 azonao aleha ity lahatsoratra ity izay anaovako ny sainam-pianakaviana Huawei phablet ankehitriny hanomezana anao hevitra ny amin'ny mety ho fakan-tsary Huawei Nova Plus.
Toy ny tamin'ny zandriny lahy, Huawei dia nanamafy fa ny Huawei Nova Plus dia hamely ny tsena amin'ny volana oktobra ho avy amin'ny vidiny 429 euros.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Huawei Nova Plus, notsapainay ho anao io tamin'ny IFA 2016